UMBUSO WEBENIN - Afrikhepri Fondation
Onqenqemeni lweGulf of Guinea, ihlathi livimbele ukwakhiwa kwemibuso emikhulu. Kepha kusukela ngekhulu le-XNUMX, ukusungulwa kwezindawo zokuhweba zaseYurophu ezinqenqemeni zithanda ukuthuthukiswa kwamadolobha athengiswayo ngenxa yobungcweti bawo, futhi, ngisho nakwabanye, ngenxa yobugqila.
Njengoba inezakhamizi ezingaphezu kwe-130 nge-km2 ngayinye, eningizimu yeNigeria ngesinye sezifunda ezinabantu abaningi e-Afrika. Ukutshala okuhlelekile kwamazinyo iminyaka engama-6500 XNUMX kubonakala kuthande lokhu kushuba kwabantu abaningi.
Kusedolobhaneni elincane laseNol, ethafeni eliphakathi nendawo, lapho sathola khona amakhanda we-terbotta amnandi kakhulu avela eminyakeni engama-500 ngaphambi kwenkathi yethu kanye nezivalo zezinsimbi.
Lolu lwazi ekusebenzeni kwezinsimbi aluzange luyeke ukuthuthuka ukuholele ekwenziweni kwemaskhi yethusi noma yethusi, imisebenzi yangempela yobuciko.
Idolobhana lase-Ifé, eningizimu-ntshonalanga yeNigeria, lasungulwa eminyakeni eyizi-1000 eyedlule yiYoruba, eyayivela eLake Chad ngaphansi kobuholi beNkosi Odoudoua. Ngemuva kokusekelwa kuka-Ifé, amadodana akhe ngabe ashiyile eyakhe ukuyokwakha amadolobha aseBenin, e-Oyo nase-Owo.
Kwakuvame ukuba nezingxabano phakathi kwalezi amadolobha, kepha bonke babona u-Ifé njengesikhungo sabo sezenkolo namasiko. Uma-ke abekwe ngaphansi kwegunya le- “oni”, inkosi-umpristi owengamele amasiko omkhosi wamasheya.
Imizi yaseBenin no-Oyo
IBenin, eningizimu-mpumalanga ye-Ifé, yenza umlando ngekhulu le-XNUMX.
"Ama-obas" wayo (amakhosi) ayenza ibe yisizinda esimaphakathi esizuzisa buthaka buka-Ifé kanye nokufika kwamaPutukezi ekupheleni kwekhulu le-XNUMX.
I-nizungezwe izingcweti eziningi ezenza ama-oda enzelwe ubuholi bamaPutukezi. Ngokubuya, amaPutukezi asiza i-baa ukuba ixazulule izingxabano zayo nomakhelwane.
Ngaphansi kwethonya lamaPutukezi, uBenin waqala umsebenzi wokutshala intende yamafutha kanye nokuhweba ngezigqila.
Ku-Oyo, u-"afalin" (inkosi) noma "abangane babonkulunkulu" wasizwa yindodana yakhe endala ekuqhubeni izindaba zezwe. Ukumvimbela ukuthi azame ukudingida ngemuva kokushona kukayise, “ama-oyisitis” ayisikhombisa, abahlonishwayo ababhekele ukulandela isiko, baqinisekisa ukuthi ulandela uyise wakhe ethuneni.
Ama-oyomesis agcina esethole ukunambitheka kwamandla, kepha izimpi zangaphakathi nezimpikiswano ezivela kwa-Dahomey ezingomakhelwane zazizwakala kukufa kuka-Oyo, okwaqala ukujabhisa.
Abokufika abavela e-Oyo kukholakala ukuthi bangumthombo wombuso waseDahomey, eningizimu yeBenin yanamuhla.
Inhlokodolobha yayo, u-Abomey, ogama lakhe lisho ukuthi “indawo ebiyelwe enezivikelo eziqinile”, yakhiwa maphakathi nekhulu le-XNUMX leminyaka ukuze ibe inqaba.
Isimo sasihlelekile kakhulu futhi isigodlo safakwa ilebula enzima.
Inkosi ayikaze ikhulume nabantu ngokuzwakalayo. Ubuye wakhulumisana naye ngokusebenzisa “meme”, umyeni wendodakazi yakhe yesibili, okwakufanele abonakale njengaye.
Imvelaphi yase-Afrika yendoda yaseVitruvia
Izincwadi Ezizindla Ngezinkanyezi - U-Alice Bailey (PDF)
Buka ama-Gods aseGibhithe (i-2016)